Sirdoonka Kenya oo sheegay in la dilay Haweeney ka mid aheyd kooxihii weerarka Westgate Sawirro) | Salaan Media
Sirdoonka Kenya oo sheegay in la dilay Haweeney ka mid aheyd kooxihii weerarka Westgate Sawirro)
Saraakiisha Sirdoonka Kenya iyo labo ka tirsan ciidamada booliska ayaa u sheegay Wakaalada Wararka ee Reuters in la dilay Haweeney British aheyd oo la tuhunsanaa inay ka dambeyso weerarka lagu qaaday Sabtidii Xarunta Ganacsiga Westgate ee magaalada Nairobi.
Mid ka mid ah saraakiisha ayaa sheegay in howl galkii ugu dambeeyay ee ay qaadeen ciidamada lagu dilay tiro ka mid ah Mintidiinta, ayna mid ka mid ah ay aheyd haweeney Cadaan, inkastoo la sheegayo inay socdaan baaritaano.
Laakiin Wasiirka arrimaha gudaha Kenya Joseph Ole Lenku ayaa mar uu shalay shir jaraa’id qabtay waxaa uu sheegay in kooxaha weerarka Westgate qaaday ay dhamaantood yihiin Rag aad u hubeysanaa.
Xoghayaha Arrimaha gudaha Britain Tresa May ayaa sheegtay inay baaritaano wadaan oo ku aadan in haweeney British ah ay qeyb ka tahay weerarka Westgate, iyadoo wali tuhuno jiro.
Wasiirka arrimaha dibada ee Kenya ayaa iyana sheegtay in dableyda soo weerartay Kenya ee qabsatay xaruntii ganacsiga ee Westgate, inay ku jiraan laba ilaa saddex qof oo ajanabi ah, oo ay ku kala sheegtay Maraykan iyo Ingiriis, kuwaasi oo ay ku tilmaantay in ay ku jirto ugu yaraan hal qof oo dumar ah.
Waraysi ay siisay Telifishano ku yaal Maraykan, ayaa marwo Amina Mohamed waxay ku sheegtay in dhalinyartaasi ajanabiga ah da’doodu ay kala tahay 18 jir iyo 19 jir, asalkooduna ka soo kala jeedo Soomaali iyo Carab, waxayna intaasi ku dartay in qofka haweeneyda ahi ay haysato dhalasho Ingriis ah.
Hadalkan ayaa xoojinaya ku tiri ku teen la isla dhex maryay oo aheyd in qofka dumarka ee cadaanka ah ay aheyd haweeneydii uu ka dhintay mid ka mid ah ragii fuliyay qaraxyadii bambaano ee ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay saldhigga tareenka dhulka hoostiisa mara ee magaalada London ee dalka Britain sanadii 2005tii, weerarkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof.
Haweeneydan oo ay warbaahinta Britain ugu yeerto “Carmalkii Cadaa” oo magaceedu yahay Samantha Lewthwaite ayaa loo doon doonayaa tuhun ah inay ku lug laheyd shirqool la doonayay in lagu weeraro hoteello iyo makhaaxiyo ku yaala dalka Kenya.
Sawirada Haweeneyda ayaa lagu soo bandhigay bogaga Wargeysyo ku yaala Britain iyo wakaaladaha wararka, waxaana sawirada ku jira mid kuwa qarsoon ee howl galka Westgate intii uu socday sabtidii in la arkay qof wajiga u xiran yahay, bastoolad gacanta ku heysta oo la tuhmay inay Haweeney aheyd.
Dhinaca kale Afhayeen u hadlay Al-Shabaab oo lagu magacaabo Abu Omar ayaa beeniyay in haweenka ay dagaalada u adeegsadaan, isagoo warar ku tiri ku teen ku tilmaamay wararka ay baahinayaan reer galbeedka.
Goor sii horeysay Al-Shabaab ayaa xaqiijisay in sawir la helay oo ay qaaday kaamirada qarsoon ee CCTV oo ahaa labo ka mid ah dableydii weerartay Westgate ay ka mid yihiin dagaalyahanadeeda qabsatay Westgate.
Howl galka maalintii afaraad galay ayaan wali u muuqan inuu soo afjarayo xiisada ka taagan Xarunta Ganacsiga Westgate, halkaasoo dableyda hubeysan ay ku sugan yihiin oo ay ka dagaalamayaan.